ခွင့်ပြန် မြန်မာလုပ်သားများ များပြားမှုကြောင့် ဘန်ကောက်သွားကားများ ပြတ်လပ်ကာ မြန်မာအလုပ်သ? - Yangon Media Group
ခွင့်ပြန် မြန်မာလုပ်သားများ များပြားမှုကြောင့် ဘန်ကောက်သွားကားများ ပြတ်လပ်ကာ မြန်မာအလုပ်သ?
မဲဆောက်၊ ဧပြီ ၂၁
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ စုပြုံဝင်ရောက်လာသော မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများမှာ အလွန်များပြားသည့်အတွက် ဘန်ကောက်သွားသည့်ကားများပြတ်လပ်ကာ မြန်မာလုပ်သားများ အခက်အခဲဖြစ် နေကြောင်းသိရသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ရှိရာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပြန်ဝင်မည့် မြန်မာလုပ်သားများမှာ တံတားဖွင့်သည့် နံနက် ၅ နာရီမှစ၍ တန်းစီကြသည်မှာ တံတားအလယ်ထိရောက်ရှိပြီး လူများလွန်းသဖြင့် နေပူဒဏ်ကြောင့် မူးမေ့သူများပင်ရှိခဲ့သည့်အတွက် ဧပြီ ၂ဝ ရက်နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ညနေအထိ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပေါ်မှ တုံးထုဝင်လာသူ ၁ဝဝဝဝ ခန့်ရှိသကဲ့သို့၊ လဝကရုံး အဲယားကွန်းအခန်းထဲတွင် အဝင်တံဆိပ် တုံးထုပေးသူ ၁၅ဝဝဝ ခန့်ရှိကြောင်း ထိုင်းလဝကရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
”ထိုင်းကိုပြန်ဝင်လာသူတွေများတဲ့အတွက် ဌာနကလူအင်အား ၂ဝ ထပ်မံတိုးထားပါတယ်။ ဒီနေ့ ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ်တော့ တခြားရုံးခန်းက ကွန်ပျူတာတွေယူပြီး ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အတွက် အချိန်ကြန့်ကြာမှုတွေမရှိဘဲ မြန်ဆန် အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ည ၈ နာရီလောက်ဆိုရင် ပြီးသွားမှာပါ၊ အဝင်တုံးထုပြီးလို့ကားမမီရင် ရုံးမှာအိပ်လို့လည်းရပါတယ်” ဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
”ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်မှာ နေပူခံနေရတဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေကို ထိုင်းလဝကရုံး အဲယားကွန်းအခန်း ပထမထပ်၊ ဒုတိယထပ် နှစ်ထပ်မှာထားပြီး တံဆိပ်တုံးထု ပေးတဲ့ မဲဆောက်က လဝကတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု KTG လူမှုကူညီရေးရုံးမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက် တာ ကိုသားကြီးက ပြောသည်။ ထိုင်းလဝကရုံးက နံနက် ၁ဝ နာရီမှ ည ၈ နာရီအထိ အဝင်တုံး ထုပေးလျက်ရှိသော်လည်း ဘန်ကောက်သို့သွားသည့် ကားလိုင်းမှ ကားများကုန်သွားသည့်အတွက် အလုပ်သမားအချို့ လမ်းဘေးတွင် အိပ်နေကြရကာ အခက်အခဲများစွာကြုံနေကြရ ကြောင်း သိရသည်။
အာရှကြက်တောင် ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇ?
ဖူလ်ဟမ်နည်းပြအဖြစ် ပရီးမီးယားလိဂ်သို့ ရေနီယာရီ ပြန်ရောက်လာ၊ ရေနီယာရီ မတိုင်မီ အာစင်ဝင်းဂါ
တူရကီ ဘက်ခြမ်းရှိ ဆိုက်ပရပ်စ် ကျွန်းမြောက်ပိုင်းတွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ
မိုင်းကိုင်မြို့နယ်အတွင်း တရားမဝင် သယ်ဆောင်လာသော ဆာလဖျူရစ် အက်စစ်များ သိမ်းဆည်းရမိ
”ငါက မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘယ်ဟာရဲ့ သံတမန်တာဝန် ထမ်းဆောင်ထားတယ် ဆိုပြီးတော့ ဂုဏ်ယူတယ်” မိုရီဆာကီဝင?
အီရန် နျူကလီးယား စာချုပ်ကတိကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် နိုင်ငံများ ထပ်မံ အတည်ပြု